Midnimo Halkay Taal. WQ: Mubarak HadiHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Midnimo Halkay Taal. WQ: Mubarak Hadi
by Yahye | Thursday, Sep 27, 2012
Ummamka dunida ka jiraa xoogoodu wuxuu ku dhisanyahay midnimadoodu inta ay le’egtahay, sidaa daraadeed baa waxaa la yiraahdaa, midnimadu waa waxa ay ummaduhu ku gaaraan meesha sare ee sharafta leh. Waa waxa ay dantooda ku gaari karaan. Waa waxa keena iney bulsho noolaato iyadoo deggan oo xasiloon. Waa waxa keena ummadi ineey noqoto dad laga cabsado, la tixgaliyo ama la maamuuso. Midnimadu waa quwad, waxay ka mid tahay sunanta kowniga ah ee hadii la qaato lagu gaaro guusha, hadii la gudub marana lagu mutaysto in basharka loogu hoos maro. “يد الله مع الجماعه” (Eebbe wuxuu la jirankooda yahay jmaacada). Midnimada aadamaha oo keliya horumar kuma gaaro ee xitaa cayayaanka ayaa markay midaysanyihiin oo ay wada shaqeeyaan u suurta gasha ineey sameeyaan wax markii caqliga aadamaha loo bandhigo la yaab ku noqda. Tusaale, shinnidu markay xoogeeda midayso oo ay wada shaqayso waata aad aragteen malabka ay samayso. Shaacirkii da’da yaraa ee Mohamed Muumin “Ababe” waa tii uu lahaa:
Hadii aan intaa ugaga soo gudbo gogol dhiga qormadayda oo aan u soo gondo dego dulucda qormada, waxaynu manta noolnahay wakhti dhibaatada ugu balaaran ee dunida Islaamka ka jirta ay ugu wayntahay midnimo la’aan; midnimo caqiido, midnimo hadaf, midnimo quwadeed, midnimo ganacsi, midnimo culimo, midnimo dhalinyaro iyo hogaan intaba. Waxaynu joognaa wakhti reer galbeedku ay fahmeen qiimaha ay leedahay midnimada. Tusaale, midowga Yurub (EU) waa dowlado badan oo qaarkood xoog iyo quwadba leeyihiin qaar nugliyeer (NuclearPower) haystaa xitaa ay ku jiraan. Waxay arkaan ineey noloshoodu suurtagal ahayn mustaqbalka fog hadaanay midoobin oo aysan noqon sida mareekanka oo kale. Ineey midoobaan waxay u baahantahay ineey masaalix badan ka tagaan oo ay ka tanaasulaan. Waayo waxaa la midaynayaa dowlado xoolo leh oo qani ah iyo qaar dhaqaalohoodu uu sakxada (hoos) yaalo oo aan waxbana haysan. Waxaa wax isku darsanaya oo midoobaya dowladaha Yurubta galbeed (Weastern Europe) oo dhaqaale leh sida Norway, Sweden, Netherlands iyo Switzerland iyo kuwa dhaqaalahoodu uu sakxada yaalo sida Macedonia, Kosovo, Moldova, Albania iyo kuwo kaloo la mid ah. Waxaa cajiib ah dowladahaa midoobaya dhaqan ma wadaagaan, luqad ma wadaagaan, diin ma wadaagaan, oo taariikh ma midayso; Taariikh midaysa iskaba daaye waxaa soo kala dhex martay dagaalo iyo mugdiyo ba’an. Iyadoo intaas oo dhan ay jirto ayaa hadana la midoobayaa si loo gaaro quwad iyo horumar balaaran. Intaas oo dhan iyagoo ku kala duwan bay wax isku darsadeen mustaqbalka fog iyagoo ka fikiraya iyo iyagoo arkaya basharku inuu yahay waxa ugu qaalisan ee la helo. Tolow maxaa mideeyay oo inoo diiday inaanu midowno iyadoo aynu leenahay awoodaha ay leeyihiin mid ka badan? Waa yaab! Waaxaa ina mideeya afkaar, waxaa ina mideeya dhaqan, waxaa ina mideeya qiyyam, waxaa ina mideeya manhaj, waxaa ina mideeya taariikh iyo weliba waxa dunida yaala wixii ugu qiimaha badnaa oo ah Qur’aan.
Guumaystihii reer Yurub way nakala qayb qaybiyeen markaasaynu rumeynay, kadibna soohdimo iyo xuduudday noo sameeyeen laabtayada ku qoranay. Waxaa taa kaaga sii daran ummaddii walaalaha ahayd waa la kala jar jaray, kamana suulayso ineey weli u sii kala qaybsamayso tuulooyin yar yar. Waagii muslimiintu midaysnayd waxaan ahaan jirnay qabiil soomaali la yiraahdo kana mid ah dowladdii Islaamka ee lahayd halka hoggaan. Markii guumaystuhu midnimadii iyo awooddii Islaamka uu kala qayb qaybiyay kadibna innaga dhigay qoys gobol dega oo calanna leh, ayaanu hadana usii kala qayb qabsannay maamul goboleedyo. Waxaan dhawaan aruuriyay xogta maamul goboleedyada dalkeena hooyo ka jira tiradooda, waxaan la cajiibay oo aan la amakaagay ineey manta marayaan 37 maamul goboleed, maalin walbana ay ku soo biirayaan qaar hor leh oo car cartoodii qaba aadna moodo ineey ka soo baxeen xabsi ay horaan ku jireen. Rajo intee le’eg ayaa laga sugayaa baad akhristow is leedahay ummad midnimadeedu halkaa taagantahay? Miyaan garan waynay kol hadii ummaddii Islaamka ahayd nala kasoo gooyay oo aan gobol Muslim ah oo calan leh noqonay bal inaan intaa yar ku faro adeygno si inagoo midaysan oo quwad leh aan u dhinac istaagno walaaleheena Islaamka ah biri ka maalin. Markii intaa aynu garan waynay oo aan awoodeenii kala qayb qaybinay buu cadowguna na maamushay. Waxaynu ka wiiqanay xubin kasta oo ay ummaduhu ka xogaystaan, haday noqon lahayd maamul, ciidan, cilmi, dhaqan, qiyam, dhaqaale, awood iyo qaar kaloo badan. Maxaa ka run badan Eebbe sareeyee markuu yiri,”ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم” (Ha iskhilaafina, si aydaan u fashilmin, quwadiinana aysan u tagin). Mar kale hadaynu u fiirsano shinnida, waxaan ka baran karnaa khilaafka iyo dhibkuu leeyahay. Kor waxaynu ku soo xusnay darsi iyo cashar ku saabsan shinnida oo aynu ka qaadan karno markay midaysantahay ee ay wada shaqayso guusha ay gaadho, sida ay wada shaqayntaa iyo midnimadaa ay malabka aad aragteen samayntiisa uga guul gaadho, ayaa hadana marka ay is khilaafto ay guul daraysataa oo lagaga faa’iidaystaa. Waxaa la yiraahdaa shinnida lama garto meel ay ku taalo inneey is khilaafto mooyaane, markaas ayaa la gurtaa hantideeda (malabka). Basharkuna waa sidaas oo kale, markuu is khilaafo oo ay midnimadiisu wiiqanto cadowgiisaa intuu isugu tago, gurta khayraadkiisa. Gabyaagii waynaa ee Dhoodaan bal ha innoogu tilmaamo gabay cajiib ah shinnada waxa ku dhaca markay is khilaafto. Wuxuu yiri:
Hadday shinidu malab toonsato oo meel tif kaga siiso
Intay tuduc walaalo ah tahay eey toobada u joogto
Geedaha taraxan kama naqaan mid ay ku taalaaye
Markayse talaqi guurayso eey balo taftaafayso
Tu waliba anaa talin hayeey kob isla taagtaaye
Markaasay dhawaaq tay odhan midiba taagteede
Xiinkeedi baa u taga dabeed cadow ka taag roone
Oo reerkay tigtiganaysay baa toobke loo guran e
Sidaan loogu turin baa dabeed wada taqaaniine
Ilaahay dartii oo la’isku jeclaado
isu dul qaadasho
danta guud oo laga wada shaqeeyo
caddowga oo hal dhana loogaga soo wada jeesto, innaan la noqon doqontii la yiri labo iyo toban indhood bay leedahay; kow iyo tonban indhood inta u xigta ayeey isaga eegtaa, il kaliyana caddowga ayey isaga eegtaa. Xaaji Aadan “Af Qakooc” (AHUN) waa halkii uu ka yiri “Indhaha aad isku aragtaan cadaawaha iskaga eega”. Waa hubaal hadii intaa la inaga helo innaynu gaareyno halkaan hiigsanayno; Qof ahaan, Qoys ahaan, iyo Qaran ahaanba.
Guntii iyo gabagabadii qoraalkayga waxaan ku soo gunaanadayaa talo iyo dardaaran. Aan ku horeeyo dardaarankee waxaa jiray oday 80 jir ahaa oo uga tagay wiilashiisa dardaaran aan is dhihi karo waa qaaciido nololeed dhab ah. Waxaa la yiri markii uu arkay ineey geeridii u soo dhawaatay ayuu u dhawaaqay shan wiil oo uu dhalay. Wuxuu ku yiri, “Nin walbow ul ii keen”. Uulihii baa la keenay, markaas ayuu yiri, “ Nin walbow usha aad hayso kala jebi”. Si fudud buu mid waliba ushii uu haystay u kala jebiyay. Shantii ulood oo la isku geeyay buu midkood u dhiibay oo uu ku yiri “ Bal tana kala jebi”. Wuu kala jebin kari waayay.Mid kastoo wiilashii ka mid ahna wuu awoodi kari waayay inuu kala jabiyo ulihii markii la isku geeyay. Markaas ayaa isagoo la dardaarmaya wiilashiisa wuxuu yiri:
_____________________________ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل_________________________